Tether-egosi ya mmekọrịta na auditor kwusiri
Tether, na issuer nke dollar-pegged cryptocurrency USDT, kwuru, sị ya mmekọrịta oditi ike Friedman LLP kwusiri.
Friedman e-arụ ọrụ na ihe oditi nke Tether, nke nwere nso agbatị na cryptocurrency mgbanwe Bitfinex. Olu na-akatọ nke abụọ ụlọ ọrụ kwuru na Tether e ibi akwụkwọ tokens si mkpa ikuku ụgbọala elu ego nke bitcoin na mgbanwe.
The ọnụ na-ekwuchitere si emailed na nkwupụta okwu na-agụ:
“Anyị na-egosi na mmekọrịta na Friedman na-etisasịwo… e nweghị setịpụrụ na-eduzi usoro ma ọ bụ ọ bụla benchmark megide nke tụọ ya ihe ịga nke ọma.”
Thailand si 2nd obodo kasị ukwuu Chiang Mai ahụ mbụ Bitcoin vending igwe
The Bitcoin vending igwe n'egosi mbụ ya na Thailand nke abụọ kasị ukwuu obodo, nke nwere nanị ihe karịrị 1 nde mmadụ n'ógbè, aka “Metro” Chiang Mai.
The igwe nwere a ihuenyo mmetụ na-arụ ọrụ site ịgụ isiokwu a QR code (Ikekwe site smart ekwentị) maka anata Bitcoin wallet adreesị nke Bitcoin e zigara. E nwekwara a mkpịsị aka ebipụta nyocha na akụrụngwa.
Ọ na-emi odude ke upscale na-ewu ewu “Nimman” ebe Chiang Mai. The Cafe na-akpọ Cube 7 na bụ a nnukwu Cafe na ime ụlọ na n'èzí aba, nakwa dị ka a nzukọ ụlọ. The nwe kwuru na ha na-eme atụmatụ na-anabata Bitcoin maka nri na ihe ọṅụṅụ na n'ọdịnihu dị nso, nke ga-eme ka ha sonyere 5 ọzọ ulo oru na obodo ịnakwere Bitcoin dị ka coinmap.org
Hacked Tokyo cryptocurrency mgbanwe akwụghachi nwe $ 425M
Tokyo dabeere cryptocurrency mgbanwe Coincheck Inc kwuru na Sunday ya ga-alaghachi banyere 46.3 ijeri yen ($425 nde) ọ furu efu na hackers ụbọchị abụọ gara aga na otu n'ime ndị kasị-ebi thefts nke dijitalụ ego.
Abụọ na isi mmalite na kpọmkwem ihe ọmụma nke okwu si Japan si Financial Services Agency (FSA) zitere a mara na mba Olee ihe enyemaka 30 sịrị na-arụ ọrụ virtual ego mgbanwe ka aka nke ọzọ na o kwere omume cyber-ọgụ, agba ha ume ịbanye nche.
Taiwan na akụ etiti president ezube ahu nagide blockchain
Taiwan Central ban ...
Previous Post:Olee otú m Echefuola na fọrọ nke nta 200 Bitcoin trading a n'ọnwa gara aga